Karkaar: Degmada Waaciye oo laga hirgeliyey Haro Biyaha kaydisa (Sawiro) – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2012 5:56 b 0
Waaciye, Nov 28 Degmada Waaciye oo katirsan gobolka Karkaar ayaa markii ugu horaysay laga hirgaliyay Balli biyood aad u wayn kaasi oo loogu talagalay in shacabka ku nool degmada Waaciye ay isticmaalaan xiliyada abaarta oo horay dadku ay dhibaatooyin dhanka biyaha ula kulmi jireen.
Balliga laga hirgaliyay degmada ayaa dhaqaalaha ku baxay waxaa bixiyay Midowga Yurub oo fulinta mashruucan soo marsiiyay hay’adda UNICEF,Waxaana si toos ah u fuliyay mashruuca hay’adda Terrasolidarity, qalabka lagu fuliyay Balliga ayaa laga keenay dalka Talyaaniga.
Masuliyiinta hay’adda Terrasolidarity ayaa mashruucan ku wareejiyay hay’adda tamarta iyo biyaha Puntland ee PASWEYN, waxaana la filayaa balliga inay siweyn uga faa’iidaystaan shacabka degmada Waaciye.
Hay’adaha UNICEF iyo Terrasolidarity ayaa balanqaaday in todobo mashruuc oo noocan oo kalle ah inay ka fulin doonaan deegaanada Dhuudo, Durduro , Benderbayla Addisoone iyo tuulooyin biyo yari ay ka taaganyihiin oo katirsan gobolka Karkaar.
Islaan Bashiir ISlaan C/dulle oo maanta Gaalkacyo soo gaaray si weyna loo soo dheweeyay.